Cudurka Gawracatada (Diphtheria) | Somali Health
Home Cudurada Cudurka Gawracatada (Diphtheria)
Cudurka Gawracatada (Diphtheria)
Gawracatada waa infakshan aad u faafa oo sababi kara dhimasho haddi aan la daaweyn. Gawracato waxa uu halleela cunaha, afka iyo sanka. Cudurka waxa uu ku faafa qufaca iyo hindhisada, adigoo xiriir dhaw la yeesho qof cudurka qaba. Sidoo kale, waxa aad ka qaadi kartaa adiga oo la wadaaga qofka cudurka qaba waxyaabaha, sida koobabka.
Isku gudbinta infekshankaan ayaa ah mid sahlan, waxaana halis ugu jira carruurta iyo dhalinyarada meel dhexaadka ah aan tallaalnayn, dadka ku nool meelaha bulshadu aad ugu badantahay iyo waliba qof walba oo u safra wadan ama meel gaar u ah cudurkaan.
Calaamadaha waxay badanaa billowdaan 2 ilaa 5 maalmood kadib markuu cudurka qaado. Haddaba, calaamadaha ugu muhiimsan ee gawracatada waa:
Xuub adag oo ku dahaarmaya dalqada qofka
Codka oo qofka kasoo bixi waaya
Qanjirada ku yaala surka oo barara
Neefsashada oo adkaata
Qandho iyo qar qaryo
Daaweynta ugu muhimsan waa:- Antibiyootik si loo dilo bakteeriyada loo yaqaan ‘gawracatada’ waayo daawooyinkaas waxay joojiyaan waxyaalaha sunta ah ay soo saarto bakteeriyada. Sidoo kale, waxaa laga marmaan ah in si buuxda u nadiifisid hadduu jiro
Siyaabaha looga hortago Gawracatada
Ka hortagga ugu muhiimsan waa tallaalka. Tallaalka gawracatada waxaa lagu daraa tallaalada cudurada xiiqdheerta iyo teetanada.
Waa hal tallaal oo lagula dagaalamo saddex cudur. Nooca ugu danbeeyay ee tallaalkan waxaa loo yaqaanaa DTAP oo loogu tala galay caruurta iyo TDAP oo Dadka waawayn loogu tala galay.
Previous articleNaasnuujinta, Naasnuujinta baraxtiran iyo Quudinta aan Dabiiciga aheyn
Next articleMashruuc indho fiiqis iyo daaweyn is kugu Jira oo laga daahfuray degmada Baardheere.
Somalihealth.net waa Shabakad soo gudbisa warar iyo macluumaad ku saabsan daryeelka caafimaadka iyo cilmi baarista caafimaad ee Soomaaliya. Waxii faahfaahin ah kala soo xiriir info@somalihealth.net